‘Ndicharamba ndakarinda kuti ndinzwe zvaanotaura’ (1)
Jehovha anopindura muprofita wacho (2-20)
‘Ramba wakamirira chiratidzo chacho’ (3)
Vanhu vakarurama vachararama nekutendeka (4)
Matambudziko mashanu kuvaKadheya (6-20)
Nyika ichazara nekuziva Jehovha (14)
2 Ndicharamba ndakamira panzvimbo yangu yekurindira,+Ndichamira parusvingo rwekudzivirira. Uye ndicharamba ndakarinda kuti ndinzwe mashoko aachandipa kuti nditaure,Uye kuti ndizive zvandichapindura pandichatsiurwa. 2 Jehovha akabva andipindura kuti: “Nyora zvauri kuratidzwa, uzvinyore zvinonyatsooneka pamahwendefa,+Kuti munhu anozviverenga zvinonzwika anyatsotsetsenura.*+ 3 Nekuti zvauri kuratidzwa zvichaitika panguva yakasarudzwa,Uye nguva yekuzadziswa kwazvo iri kukurumidza kusvika, hazvizombotadzi kuitika. Kunyange kana zvikanonoka,* ramba wakazvimirira!*+ Nekuti zvichatoitika chete. Hazvizononoki! 4 Tarisa munhu anozvikudza;Mwoyo wake hauna kururama. Asi munhu akarurama achararama nekutendeka kwake.*+ 5 Chokwadi, waini inonyengera,Saka munhu anozvikudza haazobudiriri kuita zvaakaronga. Anoramba achingoda kudya seGuva;*Akaita serufu uye haaguti. Anoramba achiunganidza marudzi eseUye achiunganidza vanhu vese kwaari.+ 6 Ko vese ava havazotauri chirevo, nedimikira, nezvirahwe pamusoro pake here?+ Vachati: ‘Ane nhamo iye anozviunganidzira zvinhu zvisiri zvake;Achazviita kusvikira riini?Ane nhamo iye anoita kuti chikwereti chake chikure! 7 Vaya vakakukweretesa havazongoerekani vasimuka here? Vachamuka vokuzunza-zunza,Uye vachapamba zvinhu zvako.+ 8 Mamwe marudzi ese achakupambaNekuti wakapamba marudzi mazhinji,+Ukadeura ropa,Ukaita mhirizhonga panyika,Uchirwisa maguta nevanogara maari.+ 9 Ane nhamo munhu anopfuma nekuita zvakaipa,Kuti avake dendere rake pakakwirira,Achiitira kuti dambudziko risasvika kwaari! 10 Wakarongera imba yako zvinhu zvinoita kuti inyadziswe. Wakazvitadzira iwe pachako* nekuparadza kwawakaita marudzi mazhinji.+ 11 Nekuti dombo richachema riri parusvingo,Uye richapindurwa nebango repadenga remba. 12 Ane nhamo munhu anovaka guta nekudeura ropa,Uye anomisa guta nezvinhu zvisina kururama! 13 Inzwa! Jehovha wemauto haasi iye here achaita kuti vanhu vashande zvakaoma asi vachingoshandira kuti moto uwane chekupisa,Uye kuti marudzi ashandire pasina?+ 14 Nekuti nyika ichazara nekuziva kubwinya kwaJehovhaSekufukidzwa kwakaitwa gungwa nemvura.+ 15 Ane nhamo munhu anopa shamwari dzake chekunwa,Achichiisa hasha nekutsamwa kuti dzidhakwe,Kuti adzitarise dzisina kupfeka! 16 Uchaguta nekuzvidzwa panzvimbo pekukudzwa. Newewo inwa uratidze vanhu kuti hauna kuchecheudzwa.* Kapu iri muruoko rwaJehovha rwerudyi ichauya kwauri,+Uye kukudzwa kwako kuchafukidzwa nekunyadziswa; 17 Nekuti ucharwiswa sekurwiswa kwakaitwa Rebhanoni,Uye kuparadza kuya kwakavhundutsa zvikara kuchauya pauri,Nekuti wakadeura ropaUkaita mhirizhonga panyika,Uchirwisa maguta nevanogara maari.+ 18 Mufananidzo wakavezwa unobatsireiZvawakangovezwawo nemunhu? Mufananidzo wesimbi* nemudzidzisi wenhema zvinobatsirei,Kunyange zvazvo uya akazvigadzira achivimba nazvo,Achigadzira vanamwari vasingatauri, vasina zvavanobatsira?+ 19 Ane nhamo munhu anoti kudanda, “Muka!” Kana anoti kudombo risingatauri, “Muka! Tirayiridze!” Iro rakaiswa goridhe nesirivha,+Uye harina kana mweya wekufema mariri.+ 20 Asi Jehovha ari mutemberi yake tsvene.+ Nyika yese ngairambe yakanyarara pamberi pake.’”+
^ Kana kuti “Kuti zviitire nyore munhu anoverenga zvinonzwika.”
^ Kana kuti “zvikaita sezviri kunonoka.”
^ Kana kuti “zvimirire nemwoyo wese!”
^ Dzimwe shanduro dzinoti, “nekutenda kwake; nezvaanotenda.”
^ Kana kuti “seSheori.” Ona Tsanangudzo Yemashoko.
^ Kana kuti “Wakatadzira mweya wako.”
^ Dzimwe shanduro dzinoti, “inwa udzedzereke.”